कहिले हुन्छ देश समृद्धी | www.aagopati.com Websoft University
कहिले हुन्छ देश समृद्धी
विराटनगर ८ असार । नेपाल एउटा बहु सांस्कृतिक ,बहु आयामिक,बहुभाषिक अनी आफ्नो बेग्लै पहिचान र फरक उदाहरण बनेको देश जहाँ भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अनगिन्ती हिमशिखरहरु रहेको देश अनि अत्याधुनिक गोला, बारूद र बन्दुक बोकेका अंग्रेजहरु संग खुकूरीको भरमा यूद्ध लडेर आफ्नो देशलाई बचाएर नेपालीहरुको सिर र स्वाभिमानलाई उच्च राखेको आफ्नो एक बेग्लै पहिचान बोकेको देश ।
तर हाम्रो नेपाल अहिले यस्तो दलदल र भुमरिमा फसिरहेको छ राजनितिक खिचातानीको अन्योलतामा अनि नेताहरूको स्वार्थमा बिग्रिरहेको छ देश । देशको झगडालाई अन्तराष्ट्रीयकरण, छिमेकिकरण या भनुम विदेशिलाई हार गुहार गरेर कस्तो देश बनाउन जादैछौँ हामी रु राजनितिक खींचातानी नमिल्दा नेपाल बन्द गर्छौ नेपाल बन्द गर्नु कुनै समस्याको समाधान होइन नत राहत नै हुन्छ यसबाट बरु यसले निर्दोष जनता अनि दैनिक काम गरेर आफ्नौ जिवीका पार्जन गर्ने ति निर्दोष सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा कति गाह्रो परिरहेको हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था देख्दा पनि मन अति रोएर आउछ । अनि के सत्ता परिवर्तन मात्र समस्याको समाधान हो त ?
जे कुरा पनि खाली सत्ता परिवर्तनमा अड्केको हुन्छ । नेपालको राजनीतिको सवैभन्दा नराम्रो पक्ष जनता र राजनीतिक नेतृत्व विचको विचारको भिन्नता प्रमुख हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
जुन दिन जनता संग नेतृत्वको विचार मिल्छ सायद त्यही दिन बाट देशको प्रगती सम्भव होला ।
हुँदा हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई नेपालमा बाच्न पनि गाह्रो हुन थालिसक्यो महंगाई , बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दो छ । भ्रष्टचारको उचाईले आसमान छोईसक्यो । अनि देशले प्रजातन्त्र ,लोकतन्त्र ,गणतन्त्र हुदै नयाँ संविधान जारी भईसक्दा पनि किन शान्ति छैन यहाँ । अझै पनि के हेरेर बसेको छ सरकार ? दिनानुदिन नेपालीको मृत्युको खबर ,कहि बेबारिसे र बलत्कार गरि हत्या त कहि योजनाबद्ध बम विष्फोट ।
संविधान आईसक्दा पनि खोई त यो देशमा स्थिरता ? खोई त आफ्नै देशमा रोजगारीको ब्यवस्था , कडा कानुन अनि कडा अनुशाषन ?
यो सव समस्या माथिल्लो अहोदामा बस्नेलाई के थाहा उनिहरुको परिवारलाई केही समस्या परेको छैन । यता सर्वसाधरणमा भने कयौको आमा बाबु आफ्नो छोरो आउने बाटो हेरिरहेका छन् । कयौका श्रीमती मुटुभित्र ब्यथा लिएर आफ्नो श्रीमान आउने दिन गनेरहेका छन् ।
अनि बाल बच्चा आफना बाबुले मिठा मिठा खानेकुरा ल्याउछ भनेर मख्ख परेर बसिरहेका होलान् । यस्तो बेलामा यतिबेला उनिहरु जस्को पर्खाइमा थिए एक्कासी उसको लास आउदा कति मुर्छित भए । कतिले सन्तान गुमाउनुपर्यो , कतिको सिन्दुर पुछियो ,कति बालबाच्च टुहुरा भए अनि अर्को तिर हरेकले आफनो फाईदा र स्वार्थको लागि नक्कली सर्टिफिकेट बेचिरहेका छन् पलपलमा ।
हुन पनि यस्तो समस्या किन नहोस त आफनो देशमा लाखौ मानिस पढाई सकेर पनि बेरोजगार भएका छन् । लाग्छ उनिहरुले राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । अनि अन्य मुलुकका नागरिक जस्ले नक्कली सर्टिफिकेटको भरमा हाम्रो आखामा धुलो छरिरहेको हुन्छ त्यहि राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि ।
अनि कसरी सम्भव छ त परिवर्तन हाम्रो सोचनै यस्तो भए, कहिले बदलिन्छ हाम्रो सोच ? कहिले देखी पराकिलो हुने । अव माथिल्लो तहमा बस्ने देखि लिएर उनिहरुको पछि लाग्ने सम्मलाई आफ्नै ब्यवस्था मिलाउनलाई समय पुग्दैन । के महसुस गर्छन जनताहरुको यस्तो पिडालाई । देशको ठुलाबढाको हालत यस्तै हो भने हाम्रो देशको परिवर्तन र शान्ती सुरक्षा कहिल्यै सम्भव छैन । सबलाई चेतना भया । भगवान संग प्राथना गरौ ।
(थापा रेडियो स्टारमा समाचार शाखामा कार्यरत छिन् ।)
Labels: मुख्य समाचार विचार